Iloft ekhethekileyo kumbindi wesixeko - I-Airbnb
Iloft ekhethekileyo kumbindi wesixeko
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguVygintas
Indawo entle kwisakhiwo sokwenyani kunye nesahlukileyo kumbindi wesixeko!
Imizuzu embalwa ukusuka kwisitalato esikhulu sabahambi ngeenyawo saseKaunas esibizwa ngokuba yi "Laisvės alėja" kunye neCawa yaseSt.
Ixhotyiswe ngokupheleleyo kwigumbi elinye lokulala elinegumbi lokuhlambela elahlukileyo.
Indawo yokupaka yasimahla yabucala iyafumaneka kwizakhiwo.
Ilungele izibini ezitshatileyo, abahambi bebodwa kunye nabahambi beshishini.
Indlu esandula ukuxhotyiswa kunye nehonjiswe ngobumnandi kwisakhiwo sembali esihlaziyiweyo.
Indlu inendawo yokulala enebhedi ephindwe kabini phezulu kunye nesofa enokuguqulwa ibe yibhedi yokulala abantu aba-2 kumgangatho wokuqala. Iitawuli ezintsha kunye nezinto zokulala zibonelelwa lundwendwe ngalunye.
Igumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawa, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi seenwele.
Ikhitshi lidityaniswe negumbi lokuhlala kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo nge hob, oveni, ifriji, iti kunye nomatshini wekofu. Kwakhona zonke izinto zokucheba, izinto zokupheka kunye neglasi ziyafumaneka ukuze uhlale ukhululekile.
Ukwenzela uncedo lwakho ezinye izinto ezinje ngesantya esiphezulu esingenazingcingo kwi-intanethi, iTV ehlakaniphile, isomisi seenwele, intsimbi, iambrela nazo zinikezelwe.
Indawo yokumisa ibhasi yimizuzu eyi-1 kuphela ukusuka kwindlu.
Indawo ikufuphi nesitrato esikhulu saseKaunas kunye nesinye sezitrato ezinde zabahambi ngeenyawo eYurophu. Kukho iindawo ezintle zokubona kunye nokutyelela phakathi komgama wokuhamba.
Kananjalo unokhetho oluninzi lweendawo zokutyela, iibar, iivenkile zekofu.
Umbuki zindwendwe ngu- Vygintas
Sikulungele ukukunika lonke ulwazi olubalulekileyo lokuhlala kwakho kunye neengcebiso malunga noko kufanelekile ukukubona kunye neendawo ezintle zokutya. Ukulungiselela wena ndingafumaneka ngefowuni, ngesms, kwiViber, nge-imeyile, ngomyalezo wakwa-Airbnb ngalo lonke ixesha.
Sikulungele ukukunika lonke ulwazi olubalulekileyo lokuhlala kwakho kunye neengcebiso malunga noko kufanelekile ukukubona kunye neendawo ezintle zokutya. Ukulungiselela wena ndinga…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kaunas